The Good Life ny Bokin'i — Trip LEE - OFISIALY SITE
Na iza na fantatrao, Foana aho miasa amin'ny boky iray mba hiaraka ny raki-kira vaovao, The Good Life. Eny ary ity boky ity dia fanafahana amin'ny Moody Mpitory Oktobra 1, 2012. Read more about izany ao amin'ny gazety eto ambany. Ary handeha ho any TheGoodLifeTheBook.com mba ho nampahafantatra rehefa mamoaka.
HIP hop Trip LEE halefa Début BOKY TSARA NY FIAINANA ON OKTOBRA 1, 2012 ALALAN'NY Moody MPITORY
Tetikasa atsy ho atsy ankehitriny manorina amin'ny famoahana rakikira ary ahitsiny "The Good Life" amin'ny alalan'ny sarotra ny olona mba tsy velona amin'ny fahazavan'ny lainga fa firotsahana amin'ny vaovao sy be voninahitra kokoa dia.
Los Angeles, Kalifornia. (Mey 17, 2012) -Billboard Tabilao-topping nahatapaka ranjo hop Trip Lee dia gearing ho amin'ny famoahana boky bitany, The Good Life (Moody Mpitory). Ny fitohizan'ny ny rakikira farany izay navoaka tamin'ny Aprily 10, 2012 ny alalan 'Vokatr'izay Records, The Good Life dia namely fivarotana ny firenena Oktobra 1, 2012.
"Nandritra ny taona maro, Foana aho manao mozika fa ireo olana izao tontolo izao ny fomba fijery sy hevitra an'i Kristy – fa efa nisy foana ny fetra ny mozika, fa misy ihany be dia afaka mifampiresaka amin'ny hira,"Hoy i Trip. "Ny rakikira nanome mpihaino sarin'ireo ny fiainana tsara, ary ny boky dia ho bebe kokoa ny boky amin'ny fomba iainana izany izy. Mivavaka aho fa ity boky ity dia hanampy ny mpamaky mba hiala amin'ny lainga sy miaina ny fomba noforonina mba ho velona. "
Amin'ny fampiasana fijoroana vavolombelona manokana ny ainy, Trip mandalina ny lainga izay efa nilaza, ary Manome filazalazana vaovao, sary ara-Baiboly ny amin'ny fiainana tsara. Mamantatra rehetra eo amin'ny fiainana, anisan'izany ny fahasambarana, fahombiazana, sy ny fitondran-tena ao amin'ny fahazavan'ny ny fahamarinana The Good fiainana ahitsiny ny teny velona toy ny tsy hitady izay hahafaly ny tenanao, fa velona noho ny finoana ny tsara Andriamanitra.
"Ny fiainana tsara dia tsy niakatra ho any an-tampon'ny orinasa tohatra, ny tsara ny fiainana dia tsy ny fiainana maimaim-poana avy amin'ny andraikitra,"Hoy i Trip. "Ny fiainana tsara mbola velona ao amin'ny handrindra amin'Andriamanitra sy nanohona rehetra fa tsy maintsy hanolotra antsika ao amin'i Kristy."
Tsy vao tonga ny kristianina sehatra mozika, Trip ny bitany Album, Raha toa izy ireo ihany Fantatro, Namely ny firenena fivarotana andro vitsivitsy taorian 'ny sekoly ambaratonga faharoa diplaoma. Tamin'io taona io ihany, izy ihany koa ny nasongadina ny Dove Award-tendren'ny, tsy mety lany andro mahazatra "müzik i Jesosy" miaraka amin'ny marika vadiny Lecrae. Trip ny sophomore Album,20/20, Navoaka tamin'ny 2008 ary Nahazo be fahombiazana: fandikana an-takela-by Top 200, mahatratra #11 eo amin'ny takela-by Albums kristianina tabilao Ary rehefa nitody tany #4 eo amin'ny tabilao ny Filazantsara. Ny fahatelo amin'ny Studio Album, Teo anelanelan'ny roa Worlds, Trip nanolotra ny famoriam-bola ny eritreritra ny fiainana ao amin'ny tontolo lavo. Ireo fisaintsainana-danja lehibe ho mpihaino ho toy B2W nanaovan'ireo amin'ny #1 ny Kristianina sy ny Gospel takelaka tabilao, #5 ny Hip Hop / Rap iTunes tabilao sy #9 ny Top Albums iTunes tabilao. Ny raki-kira ihany koa ny nahazo fanendrena Dove roa sy hizaha kintana Award for Best Filazantsara Rap / Hip Hop Album ny Taona.
Trip ny rakikira farany famotsorana, The Good Life nanaovan'ireo amin'ny #2 na amin'ny ankapobeny sy ny Hip Hop iTunes tabilao raha garnering ny #3 toerana ao amin'ny takelaka ny Hip Hop tabilao, rehefa nitody tany #17 ny Top 200 Takelaka tabilao ary naka ny #1 slot ny Kristianina sy ny Gospel takelaka tabilao.
Trip efa nitety izao tontolo izao manao ny an'arivony mpihaino. Izay mitohy amin'ireo The Good Life, Trip amin'izao fotoana izao amin'ny fitetezam-paritra sy ny firenena fampahafantarana ho nasongadina amin'ny mpanakanto isan-karazany 2012 fety anisan'izany ny Fanahy West Coast, Atlanta Fest sy Rock The Lakes, ankoatry ny zavatra hafa.
About Moody Mpitory
Mahery 115 taona, Moody Publishers dia namoaka mendri-pitokisana, substantive boky mifantoka amin'ny olana manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Mbola hihaona izy ireo izay ilain'ny tsy mitsaha-mitombo sy miovaova amin'ny tsena ny vokatra faran'izay tsara, fomba nentim-paharazana amin'ny alalan'ny boky pirinty, amin'ny alalan'ny feo sy ny horonan-tsary vokatra, ary ankehitriny amin'ny alalan'ny e-boky ho an'ny mifidy elektronika mpamaky. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho http://www.moodypublishers.com/.
About Vokatr'izay Records ary ReachLife asa fanompoana
Tonga Records ary ReachLife asa fanompoana miezaka ny, "Tetezana eo amin'ilay hantsana eo amin'ny fahamarinana ara-baiboly sy ny tanàn-dehibe teny manodidina." Natsangana tamin'ny 2003, Vokatr'izay Records dia kristianina firaketana marika mozika natokana mampiasa mozika ho toy ny fomba fiaraha-monina tonga ny tanàn-dehibe amin'ny fomba ara-Baiboly feo. Raha mampiasa Vokatr'izay Records mozika hampiharihariana ny fahamarinana ara-baiboly, ReachLife asa fanompoana mikendry ny hanome hery mpitarika asa fanompoana amin'ny mozika ity, mba hitombo ny fiangonana an-drenivohitra.
Raha mila fanazavana fanampiny sy ny lisitry ny ho avy Vokatr'izay Records sy ReachLife asa fanompoana ho zava-nitranga, tsidiho http://reachrecords.com. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny ReachLife tsidiho http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:51 aho • navalin'i
Rahalahy soa aman-tsara izahay mianakavy Mankasitraka ny artistry sy ny fomba mampiasa ny Tompo anao. Tsy manao izay mahatafintohina fa ny sasany ao amin'ny fiaraha-monina ny mpino efa nandre tsaho fa Hianao dia ny “Mason” ary nidina ny Illuminati. Tsy miezaka aho hampiely negativity, dia mankasitraka fotsiny raha afaka adiresy io. Eo amin'ny fitoerana isika eo amin'ny fiainana dia misy fanitsakitsaham-bady ara-panahy be dia be mitranga sy Mamitaka ny olona ny Kristianina sandoka, afaka ianao, azafady mba manao fanambarana ny olona dia afaka mahafantatra izay ny ny. Ny sasany ny marika vady toa mifandrambondrambona masonic marika eo amin'ny misy horonan-tsary. Tonga tany ny Tompo taorian'ny taona maro tao amin'ny asan'ny maizina ka ho fantatrao fa be dia be ny zavatra any amin'ny fiangonana dia avy amin'i Satana. Tsy mahafantatra fa avy aminao, Fa isika rehetra dia mila ho afaka ny famitahana. Masìna ianao, tsy manao izay mahatafintohina handray izany avy amin'ny toerana ny fitiavana sy fiahiana.
Anabavy ao amin'i Kristy
Michael ankosotra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:52 aho • navalin'i
Awesome! Tokony mivoaka Moody Bible Institute – Spokane ho famotsorana fampisehoana! :)